Izvo zviri nani kune yekugezera kabati?
Iyo yekugezera kabati, takangonzwa zita, tinogona kufunga nezvazvo sekabati rakaiswa muchimbuzi. Saka yekamuri yekugezera, iyo tsika yekugezera kabhodhi zvishoma nezvishoma yakava nyowani nyowani mumusika. Ndeupi mucherechedzo wetsika yekugezera makabati ndiyo yemhando yepamusoro…
Iyo yekugezera kabati tsika yakaitwa?
Sezvo hupenyu hwevanhu hunovandudzika, mufaro wehupenyu uri kuwedzera nekukwira. Makabati eimba yekugezera akanyatso kukosha pakugadzira imba yekugezera. Asi yemubvunzo wekuti kabhini yekugezera yakanaka kune chakapedzwa chigadzirwa kana chakagadzirwa, panogona kuve nevanhu vazhinji vanozeza pakusarudza…
Ndeapi matanho ekuzvidzivirira etsika makabhati makabati? 90% yevanhu havazivi
Munyaya yapfuura, isu takataura nezve maitiro ekugadzirisa iyo yekugezera kabati. Vazhinji vashandisi vakaratidza maonero avo paQQ, WeChat, uye kunyange email, vachitaura maonero avo pamaonero ari muchinyorwa, uye ndine shungu yekutaura nezvezvimwe zvinhu mukugadzirisa kwekamuri yekugezera. Taura, ipapo…
Dhizaini yaFrank "Makomo Makomo" Won The "AuTo Dhizaini Mubairo 2019" Kwakanaka Basa
Makorokoto kuna Frank's yekugezera kabhodhi chigadzirwa dhizaini, Mr.. Du akamhanya, yekuhwina mubairo wakanaka kwazvo webasa we "AuTo dhizaini yekuhwina" mukati 2019. Mushure memwedzi yakati wandei yekusarudzwa kwakawanda uye kuongororwa kwakazara nenhamba dzinozivikanwa dzinozivikanwa dzemunharaunda magadzirisiro, the "Shan Qiu" akateedzana akamira pakati pezvakanyorwa zvakawanda…
Nzira chaiyo yekuchenesa girazi
Magirazi anowanikwa kwese muhupenyu hwedu. Kana girazi racho rakasviba uye risina kusimba, vanhu vazhinji vanozoipukuta nejira rakanyorova, asi vanoona kuti pavanoipukuta zvakanyanya, blurriness inova. Dzimwe nguva vanotombozvitarisa. Handizivi, uya kuzodzidza nzira kwayo…
Iwo madziro akaiswa imba yekugezera kabati yakasimba?
Kavhenji-yakagadzikwa imba yekugezera kabati inogona kunzi inove yakakosha mhando yeiyo yekugezera fenicha mune yekugezera. Nekuda kwenzvimbo yakashomeka mubathroom, vanhu vazhinji vanosarudza madziro-akaiswa madziro makabati ekunyura kana uchiisa, kubvumira kushandiswa kwenzvimbo yekugezera. Nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwehupenyu hwevanhu kurarama, vanhu…
Inotungamira yekugezera fanicha mhinduro mupi muChina ！！
Hupenyu hwemunhu wese haugone kupatsanurwa kubva pagirazi remuchina rekugezera nesingi, iyo inova yakajairwa fanicha yekugezera mune yanhasi yekushongedza imba. Hupenyu hwemhando yepamusoro hunoda kushongedzwa kwakanaka kuti ugadzire nharaunda inodziya uye yakanaka. Muna FRANK, unogona kuwana yekugezera fenicha makabati aunoda. 2019 ari…
Maitiro ekudzivirira yekugezera sink makabati kubva mwando?
Kana uchisarudza imba yekushambidzira makabati, isu tichafunga nezvehunyoro-chiratidzo dambudziko yemhando yekushambadzira zvisina kunaka zvakawanda. Nekuda kwemvura yakawanda inoshandiswa mubathroom, Nzvimbo yakanyorova kwazvo. Saka makabhini emadziro ekugezera ane masendimita makumi mana nemasere ane hunyoro hwakadzika sei? Nhasi, semugadziri wemidziyo yekugezera,…
123Inotevera>...2049 Peji 1 of 2049